လိမ္မာတဲ့ တူလေးအတွက်စာတစ်စောင်ရေးရင်း ငိုချမိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ မိတ်ကပ် ညီညီမောင် – 7Day Update News
ညီညီမောင်ကတော့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ထိပ်တန်းမိတ်ကပ်ပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်သလို ပရိသတ်ရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုလည်း အပြည့်အဝရရှိထားသူတစ်ယောက်ပါ။ ကိုယ်တိုင်လည်း ပျော်ပျော်နေတတ်သလို ပရိသတ်အတွက်လည်း ပျော်စရာတွေအမြဲဖန်တီးပေးတတ်သူတစ်ယောက်ဖြစ်တာကြောင့် နောက်ပိုင်းမှာ အနုပညာအလုပ်တွေဆက်တိုက်လုပ်လာရတဲ့အထိ ပရိသတ်အားပေးမှုရလာခဲ့သူ ဖြစ်ပါတယ်။
လူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာလည်း နေ့စဉ်မရိုးနိုင်အောင် ပျော်စရာတွေမျှဝေပေးနေသူ သုသုကတော့ ဒီနေ့မှာ မိသားစုကိစ္စတချို့ကို ရင်ဖွင့်ရင်း ပရဟိတလုပ်နေတဲ့တူလေးအတွက် ရေးသားထားတဲ့စာတစ်စောင်ကို မျှဝေလာပါတယ်။ တူလေး ဆီရေးတဲ့စာ…. အမေ တို့ ညီအမ နှစ်ယောက် က သားတယောက်စီမွေးတယ်တစ်ယောက်က ယောကျာ်း… တစ်ယောက်က gay…. အကို ဝမ်းကွဲဆိုပေမယ့် မောင်နှမအရင်းတွေလိုပါပဲ (အခုထိတော့မတည့်ဘူး) မတည့်တာမမေးနဲ့ အဖြေတွေကရင်ထဲမှာ.. ယောင်းမ ဆရာမလုပ်ပြီးစာသင်တဲ့ငွေနဲ့ ကလေးနှစ်ယောက် သားကြီးက ရိုးရိုးအောင် ဆယ်တန်း,သမီးငယ်က (၄) ဘာသာ ဂုဏ်ထူးနဲ့ ဆယ်တန်းဒီနှစ်အောင် ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ် မရှိမဲ့ ရှိမဲ့ အမျိုးလေးကို လူ ပီသအောင်ပျိုးထောင်ပေးလို့ … ဒါ က အကို သား ကျမ တူ လူပီသ တဲ့ ကလေး… ကိုယ်ကျန်းမာစိတ်ချမ်းသာ ရောဂါဘယကင်းဝေး ပြီး မိဘကျေးဇူးသိကာ ပြန်လည်ပေးဆပ်နိုင်ပါစေ… ကိုဗစ်ကြီး လည်း အမြန်အဆုံးသတ်ပါစေ…. သူအဘွားဒေါ်ဦး ,ကျမ အမေ မဌေး(အဖွားလေး)နဲ့ အဘိုး ငွေ ရှိရင်ပြုံးပြုံးနဲ့နေမှာ…. ကလေးပြုတဲ့ လူမှူရေးလုပ်အားဒါန ကုသိုလ် အကုန်ရရှိကျပါစေနော် ဆိုတဲ့ စာသားလေးနဲ့အတူ တူလေးရဲ့ ပုံလေးကို မျှဝေပေးခဲ့ပါတယ်။
လူတကာဝေဖန်တဲ့ မိန်းမလျာတစ်ယောက်ဖြစ်ပေမယ့် ဘယ်သူ့ကိုမှ ဒုက္ခမပေးခဲ့သလို မိန်းမလျာတွေက မိသားစုကို ပိုချစ်တတ်ကြပြီး ပိုတောင် ထောက်ပံ့ပေးနိုင်ကြပါသေးတယ်လို့အမြဲပြောလေ့ရှိတဲ့ သုသုကတော့ မိသားစုကို အရမ်းသံယောဇဉ်ကြီးသူတစ်ယောက်ဖြစ်သလို ဒီနေ့မှာလည်း လိမ္မာရေးခြားရှိတဲ့ တူလေးအကြောင်း စာတစ်စောင်ရေးရင်း ငိုချမိပါသေးတယ်တဲ့ ပရိသတ်ကြီးရေ။ သူ့လိုပဲ အများအကျိုးသယ်ပိုးတတ်တဲ့ မွန်မြတ်တဲ့စိတ်ထားနဲ့တူလေးအတွက် သုသုကတော့ ကြည်နူးဝမ်းသာစွာ မျက်ရည်ကျခဲ့မိတယ် ထင်ပါတယ်နော်။
Source- Nyi Nyi Maung
လိမ်မာတဲ့ တူလေးအတှကျစာတဈစောငျရေးရငျး ငိုခမြိခဲ့တယျဆိုတဲ့ မိတျကပျ ညီညီမောငျ
ညီညီမောငျကတော့ မွနျမာနိုငျငံရဲ့ထိပျတနျးမိတျကပျပညာရှငျတဈယောကျဖွဈသလို ပရိသတျရဲ့ခဈြခွငျးမတ်ေတာကိုလညျး အပွညျ့အဝရရှိထားသူတဈယောကျပါ။ ကိုယျတိုငျလညျး ပြျောပြျောနတေတျသလို ပရိသတျအတှကျလညျး ပြျောစရာတှအေမွဲဖနျတီးပေးတတျသူတဈယောကျဖွဈတာကွောငျ့ နောကျပိုငျးမှာ အနုပညာအလုပျတှဆေကျတိုကျလုပျလာရတဲ့အထိ ပရိသတျအားပေးမှုရလာခဲ့သူ ဖွဈပါတယျ။
လူမှုကှနျရကျပျေါမှာလညျး နစေ့ဉျမရိုးနိုငျအောငျ ပြျောစရာတှမြှေဝပေေးနသေူ သုသုကတော့ ဒီနမှေ့ာ မိသားစုကိစ်စတခြို့ကို ရငျဖှငျ့ရငျး ပရဟိတလုပျနတေဲ့တူလေးအတှကျ ရေးသားထားတဲ့စာတဈစောငျကို မြှဝလောပါတယျ။ တူလေး ဆီရေးတဲ့စာ…. အမေ တို့ ညီအမ နှဈယောကျ က သားတယောကျစီမှေးတယျတဈယောကျက ယောကျြား… တဈယောကျက gay…. အကို ဝမျးကှဲဆိုပမေယျ့ မောငျနှမအရငျးတှလေိုပါပဲ (အခုထိတော့မတညျ့ဘူး) မတညျ့တာမမေးနဲ့ အဖွတှေကေရငျထဲမှာ.. ယောငျးမ ဆရာမလုပျပွီးစာသငျတဲ့ငှနေဲ့ ကလေးနှဈယောကျ သားကွီးက ရိုးရိုးအောငျ ဆယျတနျး,သမီးငယျက (၄) ဘာသာ ဂုဏျထူးနဲ့ ဆယျတနျးဒီနှဈအောငျ ကြေးဇူးအထူးတငျပါတယျ မရှိမဲ့ ရှိမဲ့ အမြိုးလေးကို လူ ပီသအောငျပြိုးထောငျပေးလို့ … ဒါ က အကို သား ကမြ တူ လူပီသ တဲ့ ကလေး… ကိုယျကနျြးမာစိတျခမျြးသာ ရောဂါဘယကငျးဝေး ပွီး မိဘကြေးဇူးသိကာ ပွနျလညျပေးဆပျနိုငျပါစေ… ကိုဗဈကွီး လညျး အမွနျအဆုံးသတျပါစေ…. သူအဘှားဒျေါဦး ,ကမြ အမေ မဌေး(အဖှားလေး)နဲ့ အဘိုး ငှေ ရှိရငျပွုံးပွုံးနဲ့နမှော…. ကလေးပွုတဲ့ လူမှူရေးလုပျအားဒါန ကုသိုလျ အကုနျရရှိကပြါစနေျော ဆိုတဲ့ စာသားလေးနဲ့အတူ တူလေးရဲ့ ပုံလေးကို မြှဝပေေးခဲ့ပါတယျ။
လူတကာဝဖေနျတဲ့ မိနျးမလြာတဈယောကျဖွဈပမေယျ့ ဘယျသူ့ကိုမှ ဒုက်ခမပေးခဲ့သလို မိနျးမလြာတှကေ မိသားစုကို ပိုခဈြတတျကွပွီး ပိုတောငျ ထောကျပံ့ပေးနိုငျကွပါသေးတယျလို့အမွဲပွောလရှေိ့တဲ့ သုသုကတော့ မိသားစုကို အရမျးသံယောဇဉျကွီးသူတဈယောကျဖွဈသလို ဒီနမှေ့ာလညျး လိမ်မာရေးခွားရှိတဲ့ တူလေးအကွောငျး စာတဈစောငျရေးရငျး ငိုခမြိပါသေးတယျတဲ့ ပရိသတျကွီးရေ။ သူ့လိုပဲ အမြားအကြိုးသယျပိုးတတျတဲ့ မှနျမွတျတဲ့စိတျထားနဲ့တူလေးအတှကျ သုသုကတော့ ကွညျနူးဝမျးသာစှာ မကျြရညျကခြဲ့မိတယျ ထငျပါတယျနျော။
ပွညျခိုငျဖွိုးကိုမဲပေးရနျ တပျကဖိအားပေးဟုဆိုသူအမြိုးသမီး ပုဒျမသုံးခုဖွငျ့ အမှုဖှငျ့ခံရ